Five Days and Five Question « Sahakari Nepal
Five Days and Five Question
– घनश्याम अधिकारी नेफ्स्कुुन केन्द्रीय सदस्य एवं झापा जिल्ला अध्यक्ष १. नेपालमा सहकारीको अवस्था र सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको अवस्था कस्तो छ ? बर्तमानमा सहकारीको क्षेत्र मात्र नभएर राज्य सञ्चालन व्यवस्था नै परिवर्तन भएको अवस्थामा
नरेन्द्र विष्ट सञ्चालक– नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ १ अहिले बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघले के गर्दै छ ? केन्द्रीय बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघले विशेष गरेर संघीयतामा सहकारीका आवश्यक कानुन निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य
प्रतिभा सुवेदी अध्यक्ष– नारी चेतना केन्द्र बहुउद्देश्यी सहकारी संस्था १ नारी चेतना केन्द्र नेपालले किन सहकारीको स्थापना ग¥यो ? यो त सामाजिक संस्था होइन र ? समूह, बचतलाई कानुनी रुप
नवराज दाहाल निमित्त व्यवस्थापक – जनसचेतन साकोस १. एक्सेसमा गएपछि संस्थामा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? – एक्सेसमा गएपछि धेरै संस्थामा परिवर्तन आएको छ । एक्सेसका ८६ वटा सूचक पालना
पार्वती खाड राई उपाध्यक्ष–नेफ्स्कुन १ नेफ्स्कुन खासगरी कुन क्षेत्रमा फोकस गरेको छ ? नेफ्स्कुन मुख्यःत बचत तथा ऋणमा फोकस हुने नै भयो । यसका साथै सबै संस्थाहरूलाई सुरक्षित बनाउनका लागि
रामबहादुर जिसी सञ्चालक–राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड १ राष्ट्रिय सहकारी बैंकले देशव्यापी रुपमा कसरी सेवा दिइरहेको छ ? देशभरका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई बित्तीय सेवासँगै सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ
शरदकुमार महर्जन अध्यक्ष-जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ ललितपुर१. जिल्ला बहुउद्देश्यीय १सहकारी संघले के गर्दै छ ? गत माघ ६ गतेको निर्वाचनले मेरो नेतृत्वमा दोस्रो कार्यकाल चयन भएको छ । हामी जिल्ला
अर्जुन पोखरेल अध्यक्ष- नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघ नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघकोे हालै नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । संघको आठौं वार्षिक साधारणसभाले अर्जुन पोखरेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन
कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ प्रतिनिधिसभा सदस्य, तनहुँ क्षेत्र १ १. सहकारीमार्फत आर्थिक विकास कसरी सम्भव छ ? सहकारीमार्फत आर्थिक विकास सम्भव छ । मलाई पनि सहकारी सञ्चालन गरेको अनुभव छ ।
बाबुराम घिमिरे अध्यक्ष-सगुन शिक्षा सहकारीसंस्था लि., सर्लाही १ शिक्षासम्बन्धी सहकारीमार्फत के के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? सहकारीमार्फत जनताका सबै खालका आवश्यकताहरू पूरा गर्न पाउनुपर्छ भनेर नै संविधानमा तीन खम्बामा सहकारी